Barbell Squats - Izay rehetra ilainao ho fantatra momba azy ireo | Bezzia
Susana godoy | 04/05/2021 16:00 | fanatanjahan-tena
Manao squats barbell ve ianao? Raha mbola tsy nifidy ny hevitra toy izao ianao dia mbola ara-potoana ihany satria tsy isalasalana fa hahatratra vokatra lehibe ianao. Fantatsika fa ny squats dia anisan'ny fanazaran-tena mendrika ny sira, ankoatry ny fiovana isan-karazany dia tsy ho reraka mihitsy isika.
Noho izany, androany isika dia tavela miaraka amin'ireo izay mampiasa bara ary tahaka izany, manolotra tombony tsy manam-petra izay tokony ho fantatrao ihany koa izy ireo. Ho hitanao aloha izay ny faritra iasana indrindra amin'ity fanazaran-tena ity ary ny fomba tokony hanaovanao azy ireo tsara. Nanomboka izahay!
1 Inona no fiasan'ny squats barbell?
2 Ny lesoka fototra tsy maintsy ahitsy
3 Inona no teknika tsara indrindra amin'ny fikolokoloana amin'ny barbel
Inona no fiasan'ny squats barbell?
Voalohany indrindra rehefa tsy maintsy mikorisa, izay hiasa amin'ny minitra voalohany izahay dia ny quadriceps. Na dia marina aza fa ny vatana ambany dia iray amin'ireo mpandray anjara amin'ny ankapobeny. Na eo aza izany dia marina fa maro ny olona mino fa fanatanjahan-tena ho an'ny tongotra fotsiny izany fa tsy. Efa hitantsika fa ankoatr'ity faritra ity, ny lumbar sy ny lamosina koa dia tena voarohirohy. Amin'izany fomba izany dia tsy maintsy manana fampiharana tsara foana isika mba hahafahantsika mankafy fampiharana marina. Izany no antony ahafahantsika manampy fa amin'ny ambaratonga faharoa dia misy koa ny hozatry ny feny na ny mpaka ankeriny sy ny kibony.
Ny lesoka fototra tsy maintsy ahitsy
Iray amin'ireo lesoka izay tsy tokony hialantsika foana rehefa manao squats dia ny fampivoarana ny vatan-kazo. Indraindray, noho ny bara, dia ataontsika mandroso kokoa ny soroka, izay midika fa tsy eo amin'ny toerana tsara indrindra ny lamosina. Ka tsy maintsy midina miverina miverina isika fa tsy mila manangona azy. Mazava ho azy, rehefa midina fa ny lohalika dia tsy mihoatra ny tendron'ny tongotra. Tsy tokony hitambatra koa ny lohalinao rehefa midina ary kely kokoa aza rehefa miakatra. Satria iray hafa amin'ireo lesoka matetika indrindra io ary tsy maintsy ialantsika amin'ny sarany rehetra mba hampiasa tsara ny fampiofanana ataontsika ary hitandrina hatrany ny vatantsika.
Ny zavatra iray tena ilaina koa dia ny olan'ny razambe. Ny olona sasany tsy midina ambany ary ny hafa midina ambany. Noho izany, mila mitazona teknika voalanjalanja foana ianao. Ny fihenan'ny hozatra dia mety hisy fiantraikany amin'ity fomba ity, koa raha vao manomboka ianao dia tsara kokoa hatrany ny tsy mitondra lanja be loatra. Rehefa mampihena ny feny dia tsy maintsy mifanitsy amin'ny tany izy ireo. Amin'izany no ahafantaranao fa efa manomboka manao ny asany ny glute, tsy manadino ireo quadriceps sy ny hafa.
Inona no teknika tsara indrindra amin'ny fikolokoloana amin'ny barbel
Rehefa avy nahita ny lesoka isika dia mazava fa mila miloka amin'ny hetsika marina isika ary mamela ireo fisalasalana rehetra. Noho io antony io, mba hanatanterahana teknika tsara dia mampivondrona dingana samihafa izy io, tsotra amin'ny lafiny rehetra, nefa tena ilaina ary arak'izay azo atao:
Mitsangana mitazona mafy ny bara amin'ny tànantsika roa isika. Ny lanjany dia tsy maintsy voalanjalanja ihany koa mba hahafahantsika mihetsika tsara.
Samy tsy mivoha be ny lohalika sy ny tongotra fa amin'ny toerana milay ary voajanahary, misoroka ny fifanenjanana amin'ny lafiny roa.
Midina ianao fa mitazona ny lamosinao ho mahitsy, nefa tsy mihazakazaka amin'ny soroka.
Tadidio fa ny lohalika dia tsy tokony hikasika na hanakaiky akory. Ka tsy maintsy manao hetsika madio sy midina isika. Mba hisorohana ny fanerena ny hetsika ary tsy ny lohalika ihany, fa koa ny kitrokely izay tsy tokony hiondrika amin'ny fotoana rehetra.
Fantatrao izao bebe kokoa, iray amin'ireo fampihetseham-batana lehibe azonao ampiharina amin'ny fomba tsotra. Ampifanaraho amin'izay ilain'ny tenanao foana izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » fahasalamana » fanatanjahan-tena » Squats Barbell